वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याजदर बढाए, कसले कति बढाए ? - Abhiyan news
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १२:५९ अभियान न्यूजLeaveaComment on वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याजदर बढाए, कसले कति बढाए ?
वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याजदर बढाएका छन्। असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाएका हुन्।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेसँगै ब्याजदर बढाउने होड सुरु भएको छ।राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज र मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर बीचमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न पाइँदैन।
विभिन्न शीर्षकमा दिइने कर्जाको ब्याजदर घटेकाले ऋण बढ्दा बजारमा तरलता अभावसमेत भएको छ। यही कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउन प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका हुन्।
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये निक्षेपमा सर्वाधिक ब्याज सनराइज बैंकले दिने भएको छ। भदौमा बचतमा २.५७ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको बैंकले असोजमा यस्तो ब्याजदर ५.०७ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको ७.५७ प्रतिशत ब्याज बढाएर १०.०७ प्रतिशत बनाएको जनाएको छ।
भदौमा बचतमा २.७६ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको प्राइम बैंकले असोजदेखि बचतमा ४.७६ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ। यसअघि मुद्दतीमा साढे ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको बैंकले अब ९.७६ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएको छ
एनएमबी बैंकले मुद्दतीमा अधिकतम ९.५२ प्रतिशत तथा बचतमा ६.५२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। यसअघि बैंकले मुद्दतीमा साढे सात तथा बचतमा साढे चार प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको थियो। सानिमा बैंकले मुद्दतीमा ९.५१ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएको छ।
ग्लोबल आईएमईले मुद्दतीको अधिकतम ब्याज ९.५ प्रतिशत तथा बचतमा ४.५ प्रतिशत दिने भएको छ। बैंकले यसअघि मुद्दतीमा ७.०१ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको थियो।
नबिल बैंकले यसअघि दिँदै आएको मुद्दतीको ८.०१ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर ९.२६ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ। बैंकले बचतमा दिँदै आएको ३.०५ देखि ५.०१ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरको सीमालाई बढाएर ४.२६ देखि ६.२६ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ।
त्यसैगरी, एनसीसी बैंकले मुद्दतीमा ९.२६ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ। बैंकले बचततर्फ अधिकतम ५ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ। यसअघि बैंकले मुद्दतीतर्फ ८.२६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो।
मुद्दतीमा लक्ष्मी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सिद्धार्थ, हिमालयन र सेञ्चुरी बैंकले पनि ९ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर कायम गरेका छन्। सेञ्चुरीले यसअघिको ४.५ प्रतिशत रहेको बचतको ब्याज ६.२५ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ भने मुद्दतीमा दिँदै आएको साढे सात प्रतिशत ब्याजदर बढाएर ९.२५ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ।
हिमालयन बैंकले पनि ४ प्रतिशतसम्म दिँदै आएको बचतको ब्याज बढाएर ६.१६ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ। बैंकले मुद्दतीको ८ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ। यसअघि बैंकले सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो।
सिद्धार्थ बैंकले बचतमा ४.०५ र मुद्दतीमा ९.०५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ। यसअघि बैंकले बचतमा ४ प्रतिशत तथा मुद्दतीमा सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बचतमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत ब्याजलाई ४.०२ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ भने मुद्दतीतर्फ दिँदै आएको ७ प्रतिशतको सीमालाई ९.०२ प्रतिशत पुर्‍याएकाे छ।
लक्ष्मी बैंकले बचतमा दिँदै आएको अधिकतम ४.५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर ६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाेे छ। बैंकले मुद्दतीतर्फको साढे सात प्रतिशतको सीमालाई पनि बढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाे छ।
मुद्दतीमा नौ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज कायम गर्नेमा बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट, एनआइसी एसिया, सिभिल, नेपाल एसबीआई, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक छन्। मेगा बैंकले भने हालसम्म नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेकाे छैन।
बैंकहरुले निक्षेप दिने ब्याजदर बढाएसँगै सोही अनुपातमा कर्जातर्फको ब्याजदरसमेत बढाएका छन्।
मध्य भाेटेकाेशीकाे आईपीओ पाएकाहरुलाइ खुसिको खबर, ओपनिङ्ग रेञ्ज यति धेरै
२३ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०३:१३ अभियान न्यूज
३ आश्विन २०७८, आईतवार १३:१० अभियान न्यूज
९ चैत्र २०७८, बुधबार ०२:५५ अभियान न्यूज